Nidaamka Asturnaanta & Waxyaabaha Khudaarta - Ningbo MH
Siyaasadda Khaaska ah ee Website (CN)
Yaan nahay iyo maxaa ujeedkoodu yahay siyaasaddan gaarka ah?
Nidaamkan gaarka ah wuxuu qeexayaa sida MH Industry ("MH", "ama" annaga ") u isticmaalno oo difaacno macluumaadka shakhsiga ah ee aad na siiso markaad isticmaasho website-kan.
Macluumaadka shakhsiyeed waa macluumaadka kuu tilmaami kara adiga qof ahaan nool, ha ahaato mid ahaan ama marka la isticmaalo macluumaadka kale ee aan hayno ama ay u badan tahay in la qabto. Nidaamkan asturnaanta waxa uu sharxayaa sida aan u isticmaalno una ilaalino macluumaadka shakhsiyeed ee aanu kaa soo aruurino markaad isticmaaleyso boggaan.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan siyaasadda arimaha gaarka ah ama isticmaalka macluumaadkaaga gaarka ah fadlan nagala soo xiriir. Fadlan tag qeybta "Sida Loo Helo" ee hoos ku qoran. Qeybtaan waxaan soo saarnay cinwaanka xafiiskeena diiwaangalinta, lambarka taleefanka iyo cinwaanka emailkayaga.
Maxaa dhacaya haddii aadan ku qanacsanayn siyaasadda asturnaanta?
Haddii aadan ku raacsaneyn macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee loo adeegsanayo nidaamka sirta ah waa inaad iska joojisaa isticmaalka isla markiiba. Fadlan ogsoonow inaadan awoodin inaad iibsato alaab ama adeegyo annaga naga helno boggan intaanad soo gudbin macluumaadka shakhsi ahaaneed si aad noogu diiwaangashan tahay si aad u isticmaasho websaydhkan iyo si aan u xallinno amarkaaga.
Ka waran cusbooneysiinta siyaasadda gaarka ah?
Waxaan bedeli karnaa siyaasaddan gaarka ah ee waqti-mar ah adoo cusbooneysiinaya boggan. Waa inaad si joogto ah u eegtaa boggan. Isticmaalkaaga intaa sii dheer ee boggan ka dib markii isbaddel lagu sameeyey siyaasaddan asturnaanta ayaa loo qaadi doonaa si loo muujiyo inaad akhrisay oo aad aqbashay wixii isbeddel ah. Waa inaadan adeegsan shabakaddan haddii aadan ku faraxsaneyn wax isbeddel ah ee siyaasaddan gaarka ah, waana inaad noo sheegtaa haddii isbeddeladani ay ka dhigan yihiin inaadan ku faraxsaneyn habka aan u isticmaalno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed.
Macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aanu soo aruurinno?
Haddii aad tahay mid ka mid ah macaamiishayada (tan waxaa ka mid ah macaamiisha ganacsiga iyo macaamiisha) iyo haddii aad iska diiwaangeliso inaad isticmaasho boggagooga internetka oo ay ka mid yihiin (tusaale ahaan) si aad u iibsato alaabada iyo adeegyada annaga, waxaanu ku siin doonaa inaad gasho bogaggaas . Waxaa laga yaabaa in aan kaa qaadno macluumaadka shakhsiyeed adiga oo qayb ka ah habsocodka diiwaangelinta; iyada oo qayb ka ah hannaanka internet-ka internetka; iyo si aad u hesho oggolaanshahaaga si aad u oggolaato suuq-geyn toos ah in laguu diro. Macluumaadka shakhsiyeed ee aan kaa soo uruurinno waxaa ka mid ah:
magacaaga, taariikhda dhalashada iyo macluumaadka xiriirka (sida cinwaanka boosta iyo cinwaanka boostada iyo lambarka telefoonka);
Macluumaadka ku saabsan khibradaada wax soosaarka iyo adeegyadeena;
Aqoonsigaaga Aqoonsiga MH (kaas oo Coats kuu siin doono) iyo adiga oo furaha sirta (kaas oo aad samayn doonto). Waxaa lagaa codsan doonaa inaad bixiso aqoonsigaaga iyo sirta isticmaalkaaga mar kasta oo aad gasho boggan internetka);
doorashooyinkaaga tooska ah ee iibsashada suuq-geynta iyo oggolaanshaha (fadlan tixraac qaybta "Suuq-geynta tooska ah" hoosta wixii macluumaad dheeraad ah);
faahfaahinta kaarkaaga deynta / debit; iyo
(marka la eego macaamiisha ganacsiga oo keliya) faahfaahinta ganacsigaaga iyo hawlaheeda, oo laga yaabo inay ku jiraan macluumaad shakhsiyeed.
Liiskani ma aha mid dhamaystiran waxaana laga yaabaa in mustaqbalka la cusbooneysiiyo. Waa feker caddaalad ah qaar ka mid ah macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aanu hadda kaa soo aruurin karno.
Maxaan ku sameyn karnaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aan soo aruurinno?
Waxaanu u isticmaali doonnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed ee ujeedooyinka ganacsiga sharci ahaan, tusaale ahaan:
si aad u maamusho websaydhkan iyo qandaraaskeena ama xiriirka kale ee aad la leedahay, oo ay ku jiraan si ay u bixiyaan alaabta iyo adeegyadeena;
si loo falanqeeyo habka aad u adeegsan lahayd boggaan si aad u hagaajisid badeecadaha iyo adeegyada aan bixinno iyo suuqgeynteena iyo xayeysiisyada xayeysiiska iyo ujeedooyinka cilmi baarista ee la xidhiidha hagaajinta isku midka ah (waxaan kugula xiriiri karnaa ujeedadan ama weydii dhinacyada saddexaad si aan wax uga qabano annaga - fadlan tixraac qaybta "Yaan la wadaagnaa macluumaadkan" halkan hoose);
si aad ula macaamisho oo uga jawaabto wixii isgaadhsiin, weydiin ama arjiga aad noo soo gudbiso;
inay kuu soo diraan suuq-geynta tooska ah ee ku saabsan badeecadeena iyo adeegyadeena (laakiin marka aad bixiso ogolaanshaha ku habboon ee aad u fasaxayso - fadlan tixraac qeybta "Suuq Gaar" hoos); iyo
in ay u hoggaansamaan sharciyadayada, sharciyeyn iyo waajibaadyo kale oo wanaagsan.
Liiskani ma aha mid dhamaystiran waxaana laga yaabaa in mustaqbalka la cusbooneysiiyo. Waa feker caddaalad ah oo ka mid ah ujeedooyinka hada jira ee aan u isticmaali karno macluumaadkaaga shakhsiyeed ee laga soo qaaday boggan.
Yaan la wadaagnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed?
Marka laga reebo sida faahfaahsan ee hoos ku qoran, ma beddeli doonno, ma shaacinayno, iibin doono, u qoondaynayno ama u kirayn doono macluumaadkaaga shakhsiyadeed ee dhinacyada saddexaad (macnaheedu yahay qof kasta ama hay'ad kale) haddii aanu haysan ogolaansho ama laguu oggalaan inaad sheegto sharciga ama nidaamka sharciga.
Waxaa laga yaabaa inaan macluumaadkaaga shakhsi ahaan u iibinno qof ama hay'ad kale oo loo baahdo sida qeyb ka mid ah hannaanka sharci ee sharci ahaaneed (tusaale, haddii ay dhacdo in maamulkeenu ama maamulkeena ay tahay in la qaado hay'ad dibadeed). Haddii aan sidaas samayno waxaan hubineynaa in lagu fuliyay si waafaqsan Sharciga.
Waxa laga yaabaa in laga yaabo in laga rabo sharciga ama hannaanka sharciga si loo sii daayo macluumaadkaaga shakhsiyeed hay'adaha sharciga (sida maxkamadaha, maxkamadaha, booliska ama adeegyada amniga). Si loo ilaaliyo daacadnimada boggaan iyo ilaalinta danaha macaamiisheeda iyo macaamiishooda, waxaan u hoggaansameynaa wixii codsi ah. Waxaa intaa dheer, waxaa laga yaabaa in lagaaga baahdo inaad u sheegto macluumaadkaaga shakhsiyeed mas'uuliyiinta dawladda canshuur ama ujeedooyin kale. Xaaladaha kale waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale go'aan ka gaarno in ay jirto sabab dhab ah oo aan annaga u sheegno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee hay'adaha sharciga iyo in shaaca laga qaadayo sharci ahaan iyo sharci ahaan Sharciga.
Macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed waxaa loo gudbin karaa oo ay isticmaali karaan dhammaan shirkadaha ku jira kooxda MH, qaar ka mid ah kuwan ka baxsan Shiinaha. Waxaan kaliya u gudbin doonnaa macluumaadkaaga shakhsiyadeed ee shirkadaha kale si ay u oggolaadaan in ay ka shaqeeyaan si ay u bixiyaan adeegyo noo.
Waxaa intaa dheer, waxaa jiri kara duruufo muhiim ah oo nalooga baahan yahay inaan siino macluumaadkaaga shakhsiyeed shirkadaha dibadda ama ururada si loo ilaaliyo macaamiisheena ama danaheena sharci ahaaneed. Shaacinta noocan oo kale ah ayaa loo ogolyahay Xeerku haddii ay lagama maarmaan noqoto si loo ilaaliyo danahaas oo ay tixgeliyaan maskaxdaada.
Macluumaadkaaga shakhsi ma laga wareejinayaa meel ka baxsan Shiinaha?
Macluumaadka aan kaa soo aruurinno waxaa sidoo kale laga baari karaa shaqaale ka shaqeynaya meel ka baxsan Shiinaha oo noo shaqeeya ama mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha. Shaqaalaha noocan ah ayaa laga yaabaa inay ku hawlan yihiin, waxyaabo kale, haysashada xogtaada shakhsiyeed, fulinta amar, farsamaynta ama faahfaahinta bixinta iyo bixinta adeegyada taageerada. Adiga oo gudbinaya xogtaada shakhsiyadeed, waxaad ku raacsan tahay wareejinta, kaydinta ama ka shaqeynta. Waxaanu qaadi doonaa dhammaan talaabooyinka macquul ah ee lagama maarmaanka ah si loo hubiyo in xogtaada si haboon loo daaweeyo si waafaqsan nidaamka sirta ah.
Halka aan ku siinnay (ama meesha aad dooranayso) lambarka sirta oo kuu sahli kara inaad qaybo ka mid ah boggayaga ka hesho, adiga ayaa ka masuul ah inaad xafidan ereyga sirta ah. Waxaan kaa codsaneyn inaadan cidna wadaagin erayga sirta ah.
Nasiib darro, gudbinta xogta adoo adeegsanaya internetka si buuxda ma ahan mid amaan ah. Inkasta oo aan samayn doono waxkeena ugu fiican si aan u ilaalino macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, ma xaqiijin karno ammaankaaga xogtaada loo gudbiyay boggayaga; wixii gudbin ah waa khatar adiga kuu gaar ah. Marka aan helno macluumaadkaaga, waxaanu adeegsan doonaa habraac adag oo adag iyo sifooyinka amniga si aan isugu dayno in aan ka hortago helitaanka aan la oggolayn.
Maxaa dhacaya haddii aad boggan ka isticmaashid banaanka Shiinaha?
Haddii aad boggan ka isticmaashid meel ka baxsan Shiinaha, sharciyo kale ayaa laga yaabaa in ay khuseeyaan habka macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed. Waxaan boggaan ka sameynaa gudaha Shiinaha. Annagu ma nihin shuruucda maxalliga ah ee waddankaaga, siyaasaddan asturnaantana waxaa laga yaabaa inaanay u hoggaansameyn sharciyadaas. Waa inaadan gudbin macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed illaa aad ku faraxsan tahay jagadan.
Maxaa ku saabsan macluumaadka la aqoonsan yahay?
Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa oo u soo bandhigi karnaa macluumaadka si wadajir ah (tusaale ahaan macaamiisha shakhsi lama aqoonsan karo) suuqgeynta iyo ujeedooyinka horumarinta istaraatiijiga. Macluumaadkani ma noqon doonto macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed maxaa yeelay laguma aqoonsan karo ama aqoonsan karo. Taas macnaheedu waa inuusan lahayn siyaasaddan asturnaanta iyo sharcigu.
Sideen u ilaalin karnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed?
Si looga hortago isticmaalka aan la oggolaan ama shaaca ka qaadka, waxyeelada ama lumitaanka macluumaadkaaga shakhsiyeed, waxaan ku qaadannaa tallaabooyin jireed iyo kuwo elektaroonik ah, ururo iyo farsamo ahaanba, si waafaqsan waajibaadkeena sharciga. Tani waxaa ku jiri kara codsi (tusaale ahaan, boggaani waa meel amaan ah iyo wareejin ku socota iyo ka timid boggan waa la xiri doonaa).
Adiga ayaa mas'uul ka ah ilaalinta sirta aqoonsigaaga iyo lambarkaaga sirta oo la xidhiidha helitaanka boggaga qaarkood ee boggan iyo / ama koonto kasta oo aad naga sameysey. Waxaad ogolaatay inaad aqbashid mas'uuliyadda dhammaan hawlaha ka dhacaya isku midka ah. Waa inaadan u ogolaan dadka kale in ay isticmaalaan aqoonsiga isticmaalaha ama passwordkaaga. Fadlan nala soo xiriir annagoo isticmaalayna faahfaahinta qaybta "Sida loola soo xidhiidho" hoosta haddii aad aaminsantahay in aqoonsigaaga ama lambarka sirta ah ee la yareeyey. Kuma masuul noqon doonno haddii aan loo ogalaan faahfaahinta qaddiyadaaga ama ficilada aan la fasaxin ee boggan internetka taasoo ka timid faahfaahintaada macluumaadkaaga qof kale, marka laga reebo tan sababtoo ah dayacaad la'aan.
Inkastoo dadaalkeena ku saabsan amniga waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in internetku aanu ahayn hab nabadgelyo oo isgaarsiin ah. Macluumaadka shakhsiyeed ee lagu wargaliyo internetka ayaa laga yaabaa in dad kale ay soo dhexgalaan. Kama dammaanad qaadi karno ammaanka macluumaadka shakhsiyeed ee loo soo diro iyada oo loo marayo boggan. Waxaad aqbali kartaa in aad isticmaasho websaydhada khatartaada.
Websaydaan looguma talagelin isticmaalka dadka yaryar ee da'doodu ka hooseyso da'da 13 iyo sidaan oo kale waxaan ka codsaneynaa in da 'yaryar da'doodu ka hooseyso da'da 13 ha u gudbin wax macluumaad shakhsi ah annaga oo adeegsanayna boggan. Waxaan ku talineynaa in waalidiinta iyo dadka ilmaha masuulka ka ah ay xasuusiyaan caruurtooda inay ku maamulaan xogtooda shakhsiyadeed oo si haboon oo masuuliyadi ku jirto internetka.
Websaydaani waxaa ku jira xiriiro websaydh kale. Intaa waxaa dheer, boggag kale oo ka baxsan xakameynkeena ayaa ku xiran boggan. Kuma masuul ka ah dhaqanka asturnaanta iyo waxyaabaha ku jira bogagga kale ee kale. Waa inaad taxaddar u yeelatid oo aad fiirisid bayaanka asturnaanta ee khuseeya bogga internetka ee su'aasha ah.
Kukiyada iyo shabakadaha webka
Waxaan isticmaali karnaa "cookies" boggeena. Kukiyada waa faylasha xogta oo kaydiya macluumaadka ku saabsan darawalkaaga adag ama shabakadda taas oo macnaheedu yahay in boggayaga internetka uu aqoonsan karo in aad booqatay boggayaga intaan ka hor. Waxay kuu fududeynayaan inaad ku hayso doorbidkaaga boggaan, iyo adoo eegaya sida aad u isticmaashid website-ka, waxaan u habeyn karnaa doorbidkaaga oo aad cabiri kartaa isticmaalkaaga.
Waxaad awoodi kartaa, haddii aad dooratid, nuqul ka dhigo cookies-kaaga oo aad tirtirto dhammaan cookies oo hadda lagu kaydiyo kombuyuutarkaaga. On Microsoft Internet Explorer, tan waxaa lagu sameyn karaa iyada oo xulashada 'Tools / Internet Options' iyo dib u eegista goobahaaga gaarka ah ama xulashada '' cookies '.
Waxaad ku ogaan kartaa sida loo sameeyo buugaaga gaarka ah adoo gujinaya 'caawimaadda' ee ku yaala barta shabakadaada. Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo ka mid ah boggayaga internetka ma shaqeyn doonaan haddii aad diido cookies.
Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa sawirro elektaroonik ah oo loo yaqaan 'web beacons' oo ku yaal boggaan iyo isgaadhsiinta laga soo saaro isticmaalka iyo / ama diiwaangelinta boggan, sida emails-ka-wargalinta. Shabakada shabakadu waxay inta badan ka shaqeeyaan kariimka waxaana loo isticmaalaa ujeedooyin isku mid ah.
Waxaan ku darnay liiska buuxa ee kukiyadaha loo isticmaalo mh-chine.com ee hoos ku xusan, oo ay weheliso qeexida waxa cookie la isticmaalo. Coats ma isticmaali doonto cookies si ay u soo ururiyaan macluumaadka shakhsi ahaan loo aqoonsan karo adiga kugu saabsan.
mh-chine.com waxay isticmaashaa Google Analytics, adeegga falanqaynta webka ee ay bixiso Google, Inc. Google Analytics wuxuu abuuraa kumbuyuutar si loo qiimeeyo isticmaalka boggayaga internetka waxaanan soo ururinaa warbixinno ku saabsan waxqabadka dadka.
Google waxay ku kaydisaa xogta ay soo ururiyeen cookie-yada kuyaala Mareykanka. Google ayaa sidoo kale u wareejin kara macluumaadkan dhinaca dhinacyada saddexaad halkaasoo looga baahan yahay in ay sharcigaas sameeyaan, ama marka ay dhinacyadu saddexaad u xawilaan macluumaadka Google. Google ma'aha cid kale oo la xariira cinwaanka IP-gaaga wixii macluumaad kale oo ay qabtaan Google. Adigoo isticmaalaya mh-chine.com, waxaad ogolaaneysaa falanqaynta macluumaadka adiga kugu saabsan Google sida habka iyo ujeedooyinka kor ku xusan.
mh-chine.com waxay isticmaashaa tiro alaab-qeybiyeyaal ah oo sidoo kale dhigay cookies on our website on our behalf si ay u bixiyaan adeegyada ay bixiyaan. Liiska dhammaan cookies-ka ee saddexaad ee loo isticmaalo mh-chine.com iyo waxa kasta oo loo isticmaalo in lagu soo bandhigo hoos.
Cusbooneysiinta iyo helitaanka helitaanka ama koobiyada macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed
Haddii macluumaadka shakhsiga ah ee aad na siisay ay noqoto mid aan taariikh ahayn ama aan sax ahayn, fadlan nala soo socodsii adiga oo nagala soo xiriiraya email ama boostada adoo isticmaalaya faahfaahinta qaybta "Sida loo la xidhiidho" hoos.
Haddii aad rabto inaad hesho helitaanka ama koobiyada macluumaadka shakhsiga ah ee aan kaa hayno fadlan nagala soo xiriir si isku mid ah.
Suuqgeynta tooska ah
Haddii macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed loo isticmaali karo ujeedooyinka suuq-geynta tooska ah waxaanu ka dhaadhicin doonaa bogagga ku haboon ee boggan. Isla markaa waxaan raadin doonaa oggolaanshahaaga si aad u hesho suuq-geyn toos ah ama waxaanu kuu oggolaan doonaa in aad ka-noqotid helitaanka tan (adoo ku xiran waxa laga rabo sharciyada khuseeya).
In suuq-geynta tooska ah loo soo diro telefoon ama email, SMS, cod-bixiye ama habab kale oo elektaroonig ah waxaan ku siineynaa hab fudud oo lagu diidi karo suuq-geynta tooska ah ee habka khuseeya. Haddii aad diiddo suuq-geynta elektaroonigga ah, ma hubi karno in macluumaadkaaga shakhsiyeed lagaaga tirtiro macluumaadkaaga (diiwaanka) laakiin sida ugu dhaqsaha badan macquul ah ayaan ku ogaaneynaa in aad bedeshay maskaxdaada. Tani waxay ka dhigan tahay in aan sii wadi karno inaan hayno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed (oo ay ku jiraan faahfaahintaada xiriirka) ee foomka la jabiyay, si loo hubiyo inaanu kugula soo xiriirin.
Haddii waqti kale oo aad rabto inaad bedesho fikradda ku saabsan helitaanka suuq-geynta tooska ah waxaa laga yaabaa inaad ka baxdo wakhti kasta. Waxaad samayn lahayd tan adoo cusbooneysiinaya doorbididaada adiga oo isticmaalaya boggaan ama adoo nagala soo xiriiraya boostada ama boostada adoo isticmaalaya faahfaahinta qaybta "Sida loo la xidhiidho" hoos.
Joojinta koontadaada iyo kaydinta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed
Sida waafaqsan Sharciga waxaan xaqiijinaynaa in macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed aan lagugu haynin wixii ka dheer ee lagama maarmaanka u ah ulajeedda (yada) naga dhaxaysa annaga ama dhinac kasta oo saddexaad oo ka shaqeynaya magacaaga.
Waxaannu xaq u leenahay inaan diidno adeeg ama joojino xisaabtaada annaga oo aan ogeysiis hore.
Haddii aan joojino koontadaada ama haddii aad joojiso koontadaada, waanu xirnaan doonaa sida ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah waxaanna sii wadi doonaa macluumaadkaaga shafeecada ka dib marka loo baahdo haddii ay jirto xaalad cakiran sharci ama dhibaatooyin kale. Wakhtigaas ka dib macluumaadkaaga shakhsiyeed waxaa lagu xakameyn doonaa ama laga tirtiri doonaa diiwaankeena (yada).
Sharcigu wuxuu ku siinayaa xaqqa aad ku heli karto macluumaadka adiga kugu saabsan. Xaqa aad u leedahay helitaanka waxaa lagu dhaqmi karaa si waafaqsan Sharciga. Codsi kasta oo la gali karo waxaa laga yaabaa in lagu bixiyo £ 10 si loo daboolo kharashkeena si aan kuu siino faahfaahinta macluumaadka aan kaa hayno adiga kugu saabsan.
Asturnaanta & Siyaasadda Cuntada Home Categories - Caqabado - Zippers - Ribbon & Tape - Raashin - Meelo - Buttons - Macmiilka - Tassel & Fringe / Qalabaynta - Qalabaynta Qalabka - Gawaarida & Gargaarka - Mashiinka & Qeybaha - Faaruq - Qaar kale Nagu saabsan - MHM Overview - MH Industrial - History History - Sheega Tilmaamaha - Wakiiladayada --Image Galleries - Albaabada Albaabka Nala soo xiriir - Joogitaanka Goobta - Dib u noqoshada Community - La soco - Codsiga --Nagu soo biir